သငျသညျ YANDEX ငွေအတွက်ပိုက်ဆံအိတ်၏နံပါတ်ကဘယ်လိုသိသလဲ - YANDEX - 2019
အဘယ်သို့ငါ Yandex ငွေ၌ငါ့ပိုက်ဆံအိတ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှာရမလဲ
PDF ကိုအထူးသဖြင့်ရေးဆွဲအတွက်စာရွက်စာတမ်းများ၏စာဖတ်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်မှုအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ အလှည့်၌, DWG - စီမံကိန်းနှင့်ဒီဇိုင်းစာရွက်စာတမ်းများကိုဖန်တီးရန်အတွက်အသုံးအများဆုံးပုံစံ။
အလေ့အကျင့် drawing မှာတော့မကြာခဏ AutoCAD tools တွေကိုတစ်ချောပုံဆွဲတည်းဖြတ်ရန်ရှိသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ပုံဆွဲနေတဲ့ဇာတိ AutoCAD extension ကို DWG ရှိရမည်။ သို့သော်လည်းအဘယ်သို့လျှင်ပုံဆွဲ PDF ကို format နဲ့ကြည့်ရှုရန်သာရရှိနိုင်ပါသလဲ
ဒါဟာ AutoCAD ပတ်ဝန်းကျင်တွင်စာရွက်စာတမ်းလွှဲပြောင်း၏စံနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် - ကတင်သွင်း။ ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်တယ်၏စာမကျြနှာပျေါမှာဆွေးနွေးထားတယ်။
Related ခေါင်းစဉ်များ: ဘယ်လို AutoCAD သို့ PDF ဖိုင်ထည့်သွင်းရန်
သို့သော်ဖြည့်ပါ, လိုင်း, ရိပ်တင်သွင်း, ဒါမှမဟုတ်စာသားကိုမှန်ကန်စွာလွှဲပြောင်းနိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, AutoCAD မှ PDF ဖိုင်ကနေလွှဲပြောင်းရန်အွန်လိုင်းအလုပ်လုပ်သောသငျသညျအထူး converters အဖြစ်ကူညီပေးပါမည်။
ဘယ်လို DWG ရန် PDF ဖိုင်ပြောင်း
သင့်ရဲ့အင်တာနက်ဘရောက်ဇာထဲမှာ 1. ကိုသင် PDF ဖိုင် load နိုင်ပါတယ်ရှိရာစာမျက်နှာအွန်လိုင်း converter site ကိုမှသွားပါ။
ဖိုင်ကို Download နှင့်သင့်အီးမေးလိပ်စာရိုက်ထည့်ပါ။
မိနစ်အနည်းငယ်ပြီးနောက် 2. အဆိုပါမေးလ်စစ်ဆေးပါ။ converter အဆိုပါ DWG-file ကိုရည်ညွှန်းတဲ့စာတစ်စောင်ပေးပို့သင့်ပါတယ်။
3. က Download နှင့် AutoCAD ထဲမှာဖွင့်လှစ်။ ဖွင့်ပွဲစဉ်အတွင်းအဆိုပါစာရွက်စာတမ်းပြသရပါမည်သည့်အချိန်အတိုင်းအတာအဖြစ်ယင်း၏လည်ပတ်ထားကြ၏။
အဆိုပါဖိုင် archive ကိုဒေါင်းနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ဇီပ်ဖို့ program တစ်ခုလိုအပ်နိုင်ပါသည်။
ကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်တက် Read: အမော်ကွန်းတိုက်စာဖတ်ခြင်းအစီအစဉ်များအတွက်
4. ဒါကြောင့်ပဲ! သင်က file ကိုပြောင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆက်လက်နိုငျပါသညျ!
ကျနော်တို့ဖတ်ရှုဖို့အကြံပေး: AutoCAD သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
အခုဆိုရင်သင်အွန်လိုင်း PDF ဖိုင်ရယူရန်ထံမှ AutoCAD ကူးပြောင်းဖို့ဘယ်လိုသိသော။ သွင်းကုန်နှင့် AutoCAD ၏အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ပြင်ပေးဖို့ဒီ technique ကိုသုံးပါ။